Kandidà tsy miankina: mampianjera amina kolikoly ny filana olom-boafidy 150 | NewsMada
Kandidà tsy miankina: mampianjera amina kolikoly ny filana olom-boafidy 150
Anisan’ny fepetra miainga amin’ny lalàm-pifidianana ny fitadiavana olom-boafidy anjatony ho an’ireo kandidà tsy miankina. Mampanahy be ihany ny momba izany sy ny mety ho vokany.
Takina amin’ireo kandidà tsy miankina na tsy atolotry ny antoko na vondron’antoko politika amin’izao fifidianana filohan’ny Repoblika izao ny fiantohana na fanoloran’ny olom-boafidy miisa 150 azy avy amin’ny faritra telo, araka ny lalàm-pifidianana vaovao. Hanao ahoana na inona ny ho vokany?
Maro ny manahy ny hisian’ny kolikoly: fividianana olom-boafidy amin’izay fanolorana na fiantohana kandidà izay. Na misy tambin’izany aorian’ny fifidianana, rehefa voafidy ilay kandidà. Amin’ny ankapobeny na matetika, tsy fantatr’olona loatra izay mirotsaka amin’ny anaran’ny tenany, na fantatra ihany fa tsy manana antoko na vondrona antoko manolotra matoa mandeha irery.
Tsy mora ny mitady olom-boafidy 150… resy lahatra
Amin’ny fomba ahoana no ahazoana olom-boafidy 150: resy lahatra, manohana an-kitsim-po? Raha manana antoko tamin’ny nandaniana azy izy, izay iandanian’izany amin’ny fifidianana no harahiny raha misy ny etika politika. Raha mivadika amin’izany izy, efa naman’ny olom-boavidy na toy inona faharesen-dahatra.
Raha tsy miankina indray ilay olom-boafidy, mandeha amin’ny anaran’ny tenany ka manao izay tiany hatao: hisy tambiny ho azy izay fanohanana na fanolorana kandidà?
Mbola manahirana ny kolontsaina politika eto amintsika
Na ahoana na ahoana, mbola manahirana na tsy mandeha amin’izay izy ny kolontsaina politika eto amintsika. Tsy misy ny hoe etika politika amin’ny ankamaroan’ny mpilalao politika fa tsy mpanao politika akory aza: sakaizan’ny mpandresy, mpivadibadika palitao, mandeha arakaraka ny tombontsoa manokana…
Ny efa mpiara-dia izao aza, tsy mena-mivadika ny sasany. Koa handeha ho azy ny fifamarafarana mialoha amin’ny fanohanana sy fanolorana kandidà, na fikafarafarana raha misy ny mivadika. Amin’izay kolontsaina politika tsy ao anatin’ny fifampitokisana sy fitadiavana tombontsoa manokana izay, ahina ny fitadiavana tambiny aloha na aorian’ny fifidianana. Kolikoly?
Antoko politika izao aza, tsy ilaozan’izay miandrandra tambiny amin’ny fanohanana kandidà. Vao mainka fa ny kandidà no mitady olom-boafidy hanohana azy? Hanao ahoana ny ho mpitondra fanjakana raha amin’ny fanolorana azy ho kandidà dia efa misy kolikoly? Na efa misy ny fiadrasana kendry tohina amin’izay ho tambin’izany, raha voafidy izy…